(Warbixin);-Sanbaloolshe Oo Markii Looga Adkaaday Doorashadii Jowhar Eedeyn U Jeediyay DF | Allpuntland24.com
Taliyihii hore ee Nabad Sugida Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe ayaa markii looga adkaaday doorashadii Kursiga Baarlamaan ee dhawaan ka dhacday Magaalada Jowhar ee xarunta Maamulka Hirshabelle waxa uu ku eedeeyay dowladda dhexe in ay soo fara gelisay doorashada Kursigaasi.
Sanbaloolshe oo u muuqday mid si weyn uga careysan in uu waayo Kursigaasi ayaa ku andacooday in dowladda Federaalka Soomaaliya ay Lacag dhan 1 Million oo dollar ku bixisay Kursigaasi.
Sanbaloolshe ayaa markii uu ahaa Taliyaha Nabad Sugida ku amaanay dowladda Federaalka Soomaaliya in ay mideysay Masuuliyiinta iyo Ciidanka, islamarkaana dowladdaan ay tahay mid ay ka go’antahay in ay u adeegto Shacabkeeda.
Hadaba waxaa la isweydiinayaa dowladda uu shalay sheegayay Mr Sanbaloolshe in ay tahay mid ay ka go’antahay u adeegidda shacabkeeda miyaa haatan isbedeshay mise markii xilka laga qaaday ayuu isagu isbedelay.
Arrinta sida aadka ah loo hadal hayo ayaa ah sabab dowladda Soomaaliyeed ku kallifeysa in 1 Kursi ay ku bixiso qiimaha Lacageed uu sheegayo ee gaareysa 1 Million oo dollar iyo waxa uu u dhimi karo dowladda haddii uu isagu ku soo bixi lahaa maadaama uu 1 Cod ka noqonayo 275 Xubnood oo ah Golaha Shacabka Soomaaliyeed.
Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe ayaa wajahay Waji gabax xoogan kadib markii ay soo ogaadeen Guddigii loo xil saaray dabagalka arrintii Qalbi dhagax in uu Masuul ka ahaa dhiibista Muwaadinkaasi.